ပြင်းထန်စွာဆန့်ကျင်ပါသည် | ထွေထွေထူးထူး ကိုရွှေထူး
ဘာမဟုတ်တဲ့ ရန်ပွဲလေးက စလိုက်တာ အခု မြန်မာပြည်ရဲ့ မြေလတ်မြို့လေးက မီးခိုးတွေဝေ ပြာတွေကျ မီးလောင်ထားတဲ့ လူသေအလောင်းတွေ ပြန့်ကျဲနေပြီး စစ်တလင်းပြင်ကြီးလို ဖြစ်လို့….
အခုလိုဖြစ်လိုက်တာ ဘယ်သူမှ အကျိုးအမြတ် မရဘူး… တသက်လုံးအတူ ငြိမ်းချမ်းစွာ ယှဉ်တွဲနေထိုင်လာတဲ့ ဘာသာမတူသူ လူအဖွဲ့အစည်း နှစ်ခုမှာ ဒဏ်ရာတွေကိုယ်စီ သံသယတွေကိုယ်စီနဲ့ တပူပေါ် နောက်တပူဆင့်လို့ ရှေ့လျှောက်ဘယ်လို ယုံကြည်အောင် တည်ဆောက်ကြတော့မှာလဲ…
ဘယ်ဘာသာမဆို မြန်မာပြည်တွင်း နေထိုင်နေတဲ့ မြန်မာလူမျိုး ပြည်သူတွေရဲ့ အသက်အိုးအိမ်သည်းစိမ်ကို တည်မြဲအောင် ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူတကွနေထိုင်နိုင်အောင် နိုင်ငံတော်က ဘယ်လို တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတွေနဲ့ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးမှာလဲ….
မြန်မာပြည်ကို နိုင်ငံတကာမှာ ပြန်ဝင်ဆန့်အောင် မနဲကြိုးစားနေချိန်မှာ အခုဖြစ်စဉ်တွေက ခေါင်းမဖော်နိုင်အောင် အရှက်ရ… နိုင်ငံတကာရဲ့ စာမျက်နှာမှာ ယဉ်ကျေးလိမ်မာ အသိတရားရှိလှပါတယ်ဆိုတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးဆိုတာ ဘာသာရေးအစွန်းရောက် လူဆိုးတွေဆိုတာ ဖြစ်ပြီ….
ရခိုင်မှာဖြစ်တဲ့ ဘဂ်ါလီ ရိုဟင်ဂျာတွေ ဆူပူသောင်းကျန်းတော့ အမျိုးသားရေး အသိစိတ်ဓါတ်နဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေဖက်က နာပေးခဲ့မိတယ်…. မိတ္ထီလာမှာ ဖြစ်လာတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေမှာတော့ မြန်မာတိုင်းရင်းသား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကို ဖိနှိပ်အကြမ်းဖက်လို့ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး အစွန်းရောက်တွေကို အပြင်းအထန် ရှူံ့ချကန့်ကွက်ပါတယ်…
This entry was posted in မြန်မာသတင်း, News and tagged ဗမာ ဖျက်ဆီးထားမှု, မိတ္ထီလာ ကုလား ဗမာ အရေးအခင်း, မိတ္ထီလာ အရေးနောက်ကွယ်, မိတ္ထီလာသတင်းဓါတ်ပုံများ, မိတ္ထီလာအရေးအခင်း, Burma, Burma people hit mislim in Meikhtila, Myanmar on March 22, 2013 by koshwehtoo.
← Rioting Condition in Meikhtila, Burma ကြိုးတွေနဲ့ချည်ထားခံထားရသူများ →